Koonfur Afrika oo doorashada loo dareeray - BBC Somali
Koonfur Afrika oo doorashada loo dareeray
Cabdifitaax Ibraahim Cagayare Weriye BBC Somali
Lahaanshaha sawirka nscpa
Goobaha codbixinta Koonfur Afrika, ayaa furmay saaka markii ay saacadu aheyd 7-da aroornimo, waxayna xirmi doonaan 9-ka fiidnimo, iyadoo ay dadku u codeyn doonaan doorashada shanaad tan iyo markii uu dhamaaday midab-kala-soocii.
Xisbiga talada haya ee African National Congress (ANC), ayaa la filayaa in uu markale soo hooyo guul weyn, waxaana la filayaa in uu markale soo laabto madaxweynaha haatan talada haya Madaxweyne Jacob Zuma.
Sikastaba, waxaa laga yaabaa in xisbiga uu waayo kuraasta deegaanada qaar, iyadoo uu jiraan walaac ku aadan shaqo la’aan aad u sarreysa iyo fadeexado musuqmaasuq.
Ciidammada la dagaalama rabshadaha, ayaa loo daadgureey goobaha qaar si ay ammaanka u sugaan.
Doorashada, waa tii ugu horreysay oo dadkii dhashay kaddib markii uu dhamaaday maamulkii dadka cadaanka ah ee laga tirada badan ay u suurtagalayso in ay ka qeyb qaataan, dadka falanqeeya siyaasadana waxa ay sheegayaan in badan oo ka mid ah dadkaasi in ay diiradda saari doonaan sidii ay codkooda ku dhiiban lahaayeen.
Kala doorashada dadka
Xog la aruuriyay, ayaa tilmaamaysa in hoggaanka siyaasadeed ee dalka uu saameeyay in badan oo ka mid ah dadka codkooda dhiibanaya.
Hase yeeshee, ma ay cadda in taa macnaheeda uu yahay in qeyb badan oo dadkaa ka mid ah ay u wareegi doonaan axsaabta mucaaradka ee Democratic Alliance, ee ay hogaamiso Helen Zile, ama Economic Freedom Fighters, ee uu madaxda ka yahay hogaamiyhiii hore ee dhalinyarada ANC Julius Malema.
Ololaha ANC ayaa inta badan waxa diirada ay ku saareen guulihii ay horay u soo hooyeen iyo baroor diiqda hogaamiyihii hore ee geeriyooday, Nelson Mandela.
“Madiba (Mandela) daraadii u samee, oo u code ANC” ayaa ku qoran tabeelooyinka ay ku soo bandhigayeen ololaha.
Hasayeeshee waxaa la tilmaamayaa in doorashadan ay noqon doonto markii ugu dambeysay ee lagu soo jiito dadka Koonfur Afrika guulihii laga gaaray midab-kala-soocii. Qiyaastiina afar meelood meel dadka awoodda u leh in ay shaqeeyaan wax shaqo ah ma haystaan, xog aruurin ay BBC-du sameysayna waxa ay tilmaamaysaa in shaqo la’aanta ay tahay arrinta ugu weyn ee ay hadal hayaan da’yarta codkooda dhiibanaya, ee aqoonta leh.
Goobaha codka lagu dhiibanayo
Ilaa iyo 22,000 oo xarumood, ayey dadku codkooda ka dhiibanayaan, goobahaas oo kala ah iskuulada, goobaha cibaadada, dhismayaasha maamulada iyo isbitaalada, iyadoo sidoo kale tobaneeyo gawaari ah ay u gaaf wareegayaan deegaanada fog fog halkaana ay dadka codkooda ku dhiiban karaan.
Ilaa iyo 25 milyan oo qof, ayaa isu diiwaan galiyay in ay codkooda dhiibtaan, waana qiyaastii kala bar tirada dadweynaha Koonfur Afrika.
Booliska, ayaa sheegay in ugu yaraan askari boolis ah uu joogo goob kasta oo cod laga dhiibanayo, iyadoo ciidamana la geeyay goobaha qaar si ay kala dambeynta u ilaaliyaan.
Madaxweyne Zuma, waxa uu goor dhaweyd codkiisa ka dhiibtay deegaanka uu ka soo jeedo ee Nkandala ee baadiyaha KwaZulu-Natal, halka Ms Zille ay codkeeda ka dhiibatay magaalada Cape Town, halkaa oo uu xisbigeeda uu ka taliyo.
Natiijada oo dhameystiranna waxaa la filayaa in ay soo baxdo maalinta Jimcaha.